Ciidamada Xoogga Dalka oo Duulaan Ku Ah Deegaano Ka Tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Tuesday March 24, 2020 - 14:34:45 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Ciidamada xoogga dalka oo dhowaan la wareegay deegaanka Janaale ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa duulaan ku ah deegaano cusub oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in inta badan amniga deegaanka Janaale ay xaqiijiyeen, isla markaana qorsheynayaan inay u gudbaan deegaanada kale ee gobolka shabeellaha hoose.
Wararka ayaa intaa ku daraya in duulaanka xiga ay Ciidamada qaadayaan uu ku wajahan yahay deegaanada Sablaale iyo Kuntuwaarey, waxaana qorshaha ugu weyn ciidamada yahay sidii ay ula wareegi lahaayeen degmada Kuntuwaarey oo ah degmada kaliya ee ka maqan gacanta ciidanka dowladda oo Al-Shabaab maamulaan.
Dhinaca kale Ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo ka sameeyay inta u dhaxeysa Janaale iyo Buufow, waxaana howlgalkaas isugu jiraa miino baaris iyo xaqiijin amniga wadadaas, si ciidamada ugu soo maro saadka iyo sahayda.
Wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa uu sheegayaa in Ciidamada Dowladda oo ay wehlinayaan kuwa AMISOM weli ay howlgalka wadaan,sidoo kalena mararka qaar la maqlayo rasaas ay ridayaan.